88 New Generation Students: About Us
The 88 New Generation Students (UK)
88 New Generation Students (UK) was first founded byagroup of patriotic Burmese students living and studying in the United Kingdom, who worship justice, truth and freedom, on 7th November 2010.
We areanew (UK) arm of the 8888 generation students who involved in the 8888 peoples power uprising in Burma. Asanew youth generation, we have been working hard to be an active voice at the forefront of resistance to the oppression of the Burmese military dictators, in the fight for restoring genuine democracy and Human Rights in Burma.
The fundamental idea of founding the 88 NGS (UK) is:
Firstly, to honour the strong beliefs and huge sacrifices of 8888 generation students and pro-democracy leaders who committed their lives to resist colonism, fascism and the current military dictatorship in Burma.
Secondly, to work hard towards achieving the doctrine of 8888 generation students who still remain behind bars in the notorious prisons in Burma, and meanwhile striving for the unconditional release of these students (leaders).
1. To safeguard students’ rights
To achieve democratic educational system
To bring about national reconciliation in Burma
The members of 88 NGS (UK) are devoted to the idea ofaunified Burmese Students pro-democracy movement here in the United Kingdom (working together with other such organisations at home and in exile) till we achieve democracy in Burma.
With this dynamic youth force, we are passionate to participate in the reconstruction of our future democratic nation of Burma.
UK နိုင်ငံ ၈၈မျိုးဆက်သစ်ကျောင်းသားများအဖွဲ့ သည် အင်္ဂလန်နိုင်ငံတွင်ပညာသင်ကြားလျှက်ရှိသော မျိုးချစ်စိတ်ဓာတ်ထက်သန်သည့်မြန်မာကျောင်းသားကျောင်းသူများမှ တိုင်းပြည်၏တာဝန်သည် မိမိတာဝန်ပာု စိတ်နှလုံးသွင်းကာ ကိုယ်ကျိူးစွန့် အနစ်နာခံတတ်သော မြင့်မြတ်သည့် စိတ်ဓာတ်အ၀၀ဖြင့် စုစည်းကာ ဖြစ်ပေါ်လာသော အဖွဲ့ အစည်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ အဖွဲ့ ဖြစ်ပေါ်လာပုံမှာ အင်္ဂလန်နိုင်ငံတွင်ရှိသော အခြားနိုင်ငံရေးအဖွဲ့ အစည်းများမှ 8 Mar 2010 တွင် အင်္ဂလန်နိုင်ငံ Oxford မြို့ တွင် ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့သော အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ အမျိုးသမီးများနေ့ အထိမ်းအမှတ် Burma Showပွဲ အတွက် လုပ်အားပေးခဲ့ကြသော မြန်မာမျိူးချစ်ကျောင်းသားလူငယ်တစ်စုတို့ စုစည်းမိခဲ့ကြပြီး အချင်းချင်းရင်းနှီးမှူရရှိခဲ့ကြသည်။ မိမိတို့ ၏ စိတ်ဓာတ်တူညီမှူဖြင့် အင်္ဂလန်နိုင်ငံတွင် ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့သော မြန်မာနိုင်ငံအတွက် နိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားမှူများ အစည်းအဝေးပွဲများ လူမှူရေးကူညီမှူများကို အတူတူလက်တွဲလုပ်ကိုင်းရင်း ပိုမိုရင်းနှီးလာကြသည်။ မြန်မာစစ်အစိုးရ၏ ရက်စက်ယုတ်မာမှူလူ့ အခွင့်အရေးချိူးဖောက်မှူနှင့် အခြားမတရားမှူအစုစုတို့ ကို မခံမရပ်နိုင်ဖြစ်ကာ မိမိတို့ တတ်စွမ်းနိုင်သလောက် မိမိတို့ ၏ ယုံကြည်ချက်များဖြင့် နိုင်ငံတိုးတက်မြင့်မားရေးအတွက် ဆက်လက်လုပ်ဆောင်သွားမည်ပာု သဘောတူညီချက်များကို Colindale Monastery တွင်ခိုင်မာသော ဆုံးဖြတ်ချက်များဖြင့် စုစည်းရယူနိုင်ခဲ့သည်။ ထို့ နောက် မိမိတို့ ကိုယ်တိုင်ဦးစီးကာ 31 Jul 2010 တွင် မျိုးချစ်မြန်မာကျောင်းသားများအမည်ဖြင့် ဆန္ဒပြပွဲတစ်ခုကို Copland Community School Cecil Avenue Wembley တွင်ပထမဦးစွာ ပြုလုပ်ခဲ့သည်။ ထို့ နောက်တွင် မိမိနိုင်ငံ ဒီမိုကေ၇စီနှင့် လူ့ အခွင့် အေ၇း တိုက်ပွဲ အတွက် နိုင်ငံေ၇းလှုပ်ရှားမှုများကို အင်္ဂလန်နိုင်ငံရှိ ဒီမိုကေ၇စီအေ၇း လှုပ်ရှားသော နိုင်ငံေ၇း အဖွဲ့ စည်းများ၊ တိုင်း၇င်းသား အဖွဲ့ စည်းများ၊ ဒီမိုကေ၇စီအေ၇း နိုးကြားတက်ကြွသူများအားလုံးနှင့် လက်တွဲ ပြီး တတ်အားသရွှေ့ပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်ခဲ့ သည်။
(၈၈)မျိုးဆက်ကျောင်းသားခေါင်းဆောင် ကိုမင်းကိုနိုင်၏ (၄၈)နှစ်မြောက်မွေးနေ့ (48th Anniversary of Ko MIN KO NAING Birthday Ceremony)
ရွှေဝါရောင်တော်လှန်ရေး နှစ်ပတ်လည် မီးထွန်းဆုတောင်းပွဲ ( 3rd Anniversary of Saffron revolution)
မီးထွန်းဆုတောင်းပွဲတွင် အင်္ဂလန်နိုင်ငံရောက် ၈၈မျုိုးဆက်ကျောင်းသားများ ဖြစ်သည့်ကိုဇော်ဇော်အောင် ၊ ကိုအောင်ကြီး ၊ကိုဇော်ဇော်ထွန်း နှင့် ကိုအောင်တို့ မှ ဒီမိုကေ၇စီ အေ၇းတော်ပုံ ၊ ၈၈ တော်လှန်ေ၇း သူတို့ ကြုံတွေ့ ချက်များ နှင့်ခွပ်ဒေါင်းစိတ်ဓါတ်တို့ အကြောင်း တက်ေ၇ာက်လာသူများ အား ရှင်းလင်းပြောကြားပေးခဲ့ သည်။
ပဲခူး မြို့မှ လူငယ်နှစ်ဦးအား စစ်အစိုးရ၏ ဥပဒေမဲ့လုပ်ရပ်ကိုကန့်ကွက်ခြင်း
စစ်အာဏာရှင်တွေရဲ့အောက်မှာ ငါတို့ ရဟန်ရှင်၊ ပြည်သူတွေ၊ ကျောင်းသားများပူးပေါင်းပြီး ပဲခူး မြို့မှ လူငယ်နှစ်ဦးအား စစ်အစိုးရ၏ဥပဒေမဲ့လုပ်ရပ်ကိုကန့် ကွက်ခြင်းကို England နိုင်ငံ ရောက် မျိုးချစ်မြန်မာကျောင်းသား၊ လူငယ်များမှ လန်ဒန်မြို့ ရှိ စစ်အစိုးရသံရုံးရှေ့ တွင် ၀၉၊၀၉၊၂၀၁၀ တွင် အောင်မြင်စွာ ကျင်းပပြီးစီးခဲ့ပါသည်။ ယင်းအခမ်းအနားသို့တတပ်တအားတက်ရောက်လာကြသော အင်္ဂလန်နိုင်ငံရောက်မျိုးချစ်မြန်မာကျောင်းသားများ ၊ တိုင်းရင်းသားညီအကိုမောင်နှမများ နှင့် မြန်မာ့နိုင်ငံရေး အဖွဲ့အစည်းများမှဧည့်သည်တော်များကို အထူးကျေးဇူးတင်ရှိပါသည်။
Click here for more info (https://picasaweb.google.com/burmesestudent.uk)
Englandနိုင်ငံ ရောက် မြန်မာကျောင်းသားများမှ စစ်အစိုးရ၏ မတရားသော၂၀၁၀ရွေးကောက်ပွဲအား ကန့်ကွက်ဆန္ဒပြခြင်း အခမ်းအနားကို လန်ဒန်မြို့ ရှိ စစ်အစိုးရသံရုံးရှေ့ တွင် ၀၃။၀၉။၂၀၁၀၇က် အောင်မြင်စွာ ကျင်းပပြီးစီးခဲ့ပါသည်။ ယင်းအခမ်းအနားသို့တတပ်တအားတက်ရောက်လာကြသော အင်္ဂလန်နိုင်ငံရောက်မျိုးချစ်မြန်မာကျောင်းသားများ ၊ တိုင်းရင်းသားညီအကိုမောင်နှမများ နှင့် မြန်မာ့နိုင်ငံရေး အဖွဲ့အစည်းများမှဧည့်သည်တော်များကို အထူးကျေးဇူးတင်ရှိပါသည်။
Click here for more info (https://picasaweb.google.com/burmesestudent.uk/2010BoycottElection)